Otu esi echekwa batrị igwe eletrik | ebike Shuangye
Mbido blog News Etu esi edobe batrị igwe eletrik
Datebọchị ： 2020-07-09 Categories ：News Nlele ： 2,314
Igwe eletriki igwe eletrik bụ otu akụkụ dị mkpa nke igwe eletriki igwe, ọ nwere ike ikpebi ogologo oge igwe eletrọniki ga-aga. Ọbụlagodi na agbanwere batrị igwe eletriki igwe dị mfe, dịka igwe eletriki igwe eletriki Shuangye na-emegharị batrị mbughari ewepụ, mana ugbu a ọtụtụ batrị igwe kwụ otu ebe ka na-edochi ike. Thegwọ nke dochie batrị e igwe kwụ otu ebe adịghị ọnụ ala. Otu esi eme ka batrị igwe eletrik gị dị mma bụ ihe dị mkpa. Ọzọ enwere ụfọdụ ndụmọdụ iji gbatịkwuo ndụ ya.
Mgbe ị na-ejighị ya, chekwaa e-igwe gị ebe dị jụụ na nkụ. Zere ịhapụ igwe kwụ igwe gị na ìhè anyanwụ iji metụta arụmọrụ nke batrị e-igwe.
Ọ bụrụ na-ejighị ya ruo ogologo oge, tupu ịchekwaa e-igwe kwụ otu ebe, gbaa mbọ hụ na batrị igwe eletriki eletrik ka nwere ụgwọ ụfọdụ na ya. Kwesịrị, batrị ga-ana n'etiti 40% na 80%. Zere omume gwụrụ ike zuru ezu ma na-akwụ ụgwọ batrị n'ụzọ zuru oke iji belata mbibi batrị.
N'oge oyi, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa e-igwe gị ebe dị jụụ, dị ka mpụga nke ụlọ ma ọ bụ na ụgbọala. Nke a na-a attentiona ntị iji kpoo batrị igwe eletriki ọkụ tupu ị kwụ ya ụgwọ. Fọdụ batrị igwe eletriki igwe nwere ọrụ iwepu, ọ dị mma ka iwepu batrị ma chekwaa n'ụlọ. Yabụ ị nwere ike ịgba ya ụgwọ ozugbo.
Nnyocha na-egosi na ịhapụ batrị mgbe niile na-emerụ batrị ahụ. Belata oge nke ka ịkwụ ụgwọ batrị ruru 0%. Echerela ịkwụ ụgwọ ruo mgbe ike gwụrụ, debe agwa gị na ịnapụta ya oge niile.
Jiri naanị chaja na-eweta igwe eletrik; ọzọ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ onye ọzọ chaja dị ka ndabere, na-enweta ya site na mbụ emeputa. O nwere ike belata nsogbu na-enweghị isi. Chargegba ụgwọ bụkwa akụkụ nke imebi batrị igwe eletrik. Ugbu a ọtụtụ ndị nrụpụta na-enye chaja dị mma nke na-emebu ka chaja chaja batrị ruo 90% ma ọ bụ 100%.
Ihe ndị a na-agwa gị otu ị ga - esi mee ka batrị igwe eletrik na-arụ ọrụ ọfụma. Ọ bụrụ na ịmee ha, ikekwe batrị e-igwe kwụ otu ebe ga - adị n’agbata afọ atọ ma ọ bụ anọ. N'ezie, ịzụta igwe eletrik na imepụta batrị nwere ike iwepụ ogologo ndụ maka igwe eletrọniki.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere batrị igwe eletriki igwe eletriki ma ọ bụ ozi igwe eletriki eletriki, ịnwere ike ịchọgharị ihe ndị gara aga ma ọ bụ gaa na weebụsaịtị Weebụ, họrọ ịhapụ ozi dị n'okpuru.
Tags:batrị e-bike batrị igwe eletriki
Mbụ: To ga-amata nke igwe ogologo igwe eletriki dị?
Next: Gini bu igwe inyeaka aka?
Nnukwu Ihe Banyere E-bike Battery Market
36V zoro ezo batrị igwe kwụ otu ebe H1-350
Batrị maka igwe kwụ otu ebe: ihe atọ ịchọrọ ịmara
Kedu ihe bụ batrị igwe eletriki igwe eletrik